Global Voices teny Malagasy » Any Bolgaria, Ohatra Iray Amin’ny Fanehoan’ny Mpialokaloka Maniry Mba Te Ho Vahaolana Fa Tsy Olana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2016 11:13 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Hongria, Syria, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ireo mpitsoa-ponenana avy any Gresy vokatry ny ady tany Balkan nanorim-ponenana tao Bolgaria tamin'ny taona 1913. Maro amin'ireo teratany Bolgara ankehitriny no taranaka mivantana avy amin'ireo onjanà mpialokaloka izay tafiditra soa aman-tsara ao amin'ny fiarahamonina bolgara tao anatin'ny taonjato roa farany. Sary: Wikipedia, sehatra hoan'ny daholobe
Manohy manaraka ny antsoina hoe làlan'i Balkan avy any Torkia ho any Hongria mba hitady fiainana tsara kokoa any Eoropa Andrefana, ireo mpitsoa-ponenana nandositra ny ady sy fanenjehana tany Siria, Iràka, Afghanistana sy tany an-toeran-kafa, ary ny governemanta Eoropeana sasany manohy mandray azy ireo amin'ny fankahalàna. Mampiasa ny fisiany ireo mpanao politika avy amin'ny hery ankavanana mba hampitahorana ny mpifidy azy ireo, ary any amin'ny tany sasany dia ampiasaina ho toy ny fialantsiny ami'ny asan'ny milisy  ny krizin'ny mpitsoa-ponenana.
Raha toa ianao ka mihevitra fa diso izany fomba izany, indro misy antony iray hafa hanampiana ny fahalalanao.
Ny lahatsoratra iray vao haingana  avy amin'ny Tambajotran'ireo Balkàna Mpanao Gazety Mpanao Fanadihadiana (BIRN) momba an'i Bolgaria dia milaza tantaran'ny lehilahy iray izay mampiseho ny fahafahan'ny mpialokaloka manolotra vahaolana amin'ny olana sasany efa misy, amin'izany ny fanomezan'izy ireo ny talentany ho an'ireo orinasa izay tsy ampy mpiasa tsara ofana.
“Tsy ampy olona 50 000 ny sehatry ny fandraharahana Bolgara. Ny fepetra voalohany hoan'ny mpiasa dia tokony hiteny fitenim-pirenena iray hafa ankoatry ny tenin-dreniny, satria manome tolotra ho an'izao tontolo izao ireo orinasa miasa ao Bolgaria”, hoy Vasil Velichkov, tompon'ny orinasa Sensika miorina ao Sofia manazava amin'ny BIRN.
Manampy amin'ny famenoana ny banga tahàka izany ireo mpialokaloka nahita fianarana toa an'i Elias Sulaiman, 33 taona, mpanao gazety Siriana sady mpampianatra literatiora. Tonga tao Bolgaria tamin'ny taona 2013 izy, nitady làlana ho any Alemana na Soeda, nefa nandritra ny fotoana nolaniany tao amin'ilay firenena nanampy an-tsitrapo ireo mpialokaloka dia nanomboka fantany ny fisian'ny vintana hiasàna tao amin'ny orinasa mikirakira informatika vao mivelatra tao Bolgaria, ary miasa aminà orinasa mivelatra amin'ny firenena ivelany (mampanao fifanarahan'asa ivelany) izy amin'izao fotoana izao. Nanorina fianakaviana niaraka taminà vehivavy teratany koa izy. Ny fepetra lehibe nitarika ny fahombiazany dia ny fahaizany teny Arabo sy Espaniola.
Ho azy ireo manokana, ny sehatry ny fandraharahana ao Bolgaria dia nahavita nandresy lahatra ny governemanta mba “hanamaivana ny fomba ahazoan'ireo manampahaizana tsy Eoropeana mahazo ny karatra manga Eoropeana ahazoan'izy ireo zo hiasa.” Na izany aza, somary tsy dia fahita firy ny raharahan'i Sulaiman noho ny tsy fisian'ny fanampiana ara-tsosialy avy amin'ny governemanta ho an'ny mponina mpialokaloka ankapobeny.
Fianakaviana Irakiana mpialokaloka tonga any Eoropa. Sary: Federasiona Iraisam-pirenenan'ny Vokovoko Mena sy Tsinambolana Mena, CC BY-NC-ND
Tsy Bolgaria irery no mizaka ny tsy fahampian'ny mpiasa — na fara-faharatsiny tsy ho izany, araka ny fandrosoan'ny fotoana. Manana mponina be taona ny ankabeazan'ny firenena Eoropeana, ao anatin'izany ny firenena tsy mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeana, ary raha tsy miova ny toe-draharaha, dia hila mpiasa maromaro ho afaka hanao asa isan-karazany izy ireo amin'ny hoavy tsy ho ela.
Nahita ny mponiny maro be mandao ny fireneny koa Bolgaria amin'ny tantarany vao haingana. Taona maro taorian'ny niavian'i Bolgaria hanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana, maro ny mpiasa no lasa namonjy ny kijàna maitso izay vonona tampoka ho azy ireo any amin'ireo firenena manankarena kokoa ao amin'ny vondrona Eoropeana. Ohatra, nandeha tany Angletera ny maro amin'ireo Bolgara mba hioty frezy sy ovy, na Gresy mba hiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny. Mpitsidika iray tamin'izany fotoana izany no nandre matetika ny fitarainan'ny mponina ao an-toerana momba ny “fahalasanan” ny tanora sy ny vehivavy.
”Ny tsy fampiasana vola amin'ny mpialokaloka, Vintana iray lehibe nolalovam-potsiny”
Na izany aza, tsy voatery ho voaray toy ny mpandray anjara lehibe amin'ny fiarahamonina ny mpialokaloka tonga ao Eoropa.
Ny fanambaran'ny Bratislava , nolanian'ireo filoham-panjakàna 27 sisa tavela ao amin'ny Vondrona Eoropeana (tsy miaraka amin'i Angletera) tamin'ny 16 Septambra, dia mampiasa fiteny toa mandranitra fa tsy fampahatsiahivana bebe kokoa ny toetry ny ady miohatra amin'ny maha-olombelona. Ohatra, miresaka izy momba ny ‘fanolorantenan'ny firenena maromaro mpikambana amin'izao andro izao mba hanolotra fanampiana maika hanamafisana ny fiarovana ny sisintanin'i Bolgaria miaraka amin'i Torkia, no sady manohy manohana ireo “Fanjakana sasany any ambava-ady” (nampiana fanamafisana).
Mahatsiaro marefo eo anatrehan'ny fampijaliana ireo mpialokaloka sy ireo hafa mpifindra monina. Nanamarika  ny tranonkala Politico.com fa ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona any Hongria dia naneho ny ahiahiny mikasika ny fiarahamonina iraisam-pierenena izay manodina ny masony tsy hahita ireo fanararaotana isan-karazany ataon'ireo manampahefana any amin'ny sisintanin'i Hongria.
Hongria “nataony niaina ny helo ireo olona ireo mialoha ny nandefasana azy niverina any Serbia” – @LydsG ao amin'ny @POLITICOEurope
Nanana anjara tamin'ireo krizin'ny mpitsoa-ponenana nandritra ny 100 taona farany i Eoropa. matetika tsy mba namaly fitserana ny fitondram-panjakana, na eo aza ny fitondrantena tsy maintsy arahana. Maro amin'ireo firenena any amin'ny làlan'i Balkàna ankehitriny no voakasika mivantana ho toy ny loharano nipoiran'ireo olona lasa an-tsesitany, no sady toy ny toeram-piantsonan'ny mpitsoa-ponenana taorian'ny ady tao Balkàna , ny Ady Lehibe I, ny Famonoana faobe ,, ny Revolisiona Hongroà ny taona 1956 , ary ireo fampielezankevitra ho ‘fanadiovana ara-poko’ tamin'ny taona 1990 tany Iogoslavia teo aloha.
“… Manome rariny ireo izay manampy ny mpialokaloka fa tsy amin'ireo izay manala baraka azy ireo ny tantara.”
Naneho ihany koa ny tantara fa amin'ny toe-javatra maro, mety hiteraka fijaliana betsaka toy ny fanavakavahana sy tsy fandeferana tsotra izao ny fahadisoam-pitantanana ara-toetsaina. Maro amin'ireo nampihatra ny fampijaliana nandritra ny zava-nitranga ara-tantara voalaza etsy ambony no nilaza taty aoriana fa nankatò sy nanaraka an-jambany fotsiny “ny baiko sy ny fitsipika” izy ireo.’
Namoaka tatitra ny Ivon-toerana hoan'ny Fanampiana ara-Pitsarana “Voice in Bulgaria / Feo any Bolgaria” taorian'ny fanadihadiana ny lafiny ara-pitsarana sy maha-olona momba ny fihazonana ireo mpitsoa-ponenana sy mpangataka fialokalofana maherin'ny 30.000 tamin'ny taona 2015 ary mihoatra ny 5000 nandritra ny dimy volana voalohan'ny taona 2016. Ny ankamaroan'ireo olona voasambotra dia avy any Siria, Afganistàna ary Iràka.
Fihazonana ny #mpifindra monina any Bolgaria: sintony ny tatitra feno https://t.co/OFrmsp49rJ
Afaka koa mitsidika ny tranonkala: https://t.co/XWUMP8AUXe
Ny tatitra dia nanamafy ny fisian'ny “fanao mahazatra amin'ny fisamborana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mifototra kokoa amin'ny politika ho ” fandraisana an-tànana” ny fitomboan'ny fifindràmonina fa tsy ny fijerena tsirairay ny tranga manokana ary ny tena ilàna ny fametrahana fotsiny ity karazana fepetra ity ho fanatratrarana ny tanjona farany amin'ny fanesorana ireny olona ireny ao amin'ny firenena.”
Nomarihany ihany koa ny momba ireo toetsaina mampiahiahy manoloana ireo zaza tsy ampy taona tsy misy mpanaraka ary ny fanaovana kolikoly mandritra ny fisamborana.
Mety hahasoa ny roa tonta, ny mpialokaloka sy ny firenena mpampiatrano, ny fialàna amin'io toetsaina feno fankahalàna io.
Tamin'ny 2014, nanao famelabelarana TED i Melissa Fleming, avy amin'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana, momba ny tokony hanampiana ny mpitsoa-ponenana hanorina indray ny fiainany, fa tsy hamela azy ireo fotsiny ho tafavoaka velona.
Ny tsy fampiasana vola amin'ny mpitsoa-ponenana dia vintana lehibe iray nolalovam-potisny. Ny fandaozana azy ireo amin'ny manjò azy ireo dia mamela azy ireo hiharan'ny fanararaotana sy ny herisetra, mamela azy ireo tsy hanana traikefa sy tsy hahita fianarana, ary manatara an-taonany maro ny fiverenana amin'ny fandriampahalemana sy firoboroboana any amin'ny tanin'izy ireo […] Afaka mitàna fanalahidin'ny fandriampahalemana maharitra ireo niharan'ny ady, ary afaka hanakana ny tsingerin'ny herisetra ny mpitsoa-ponenana..
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/22/88943/
 asan'ny milisy: https://globalvoices.org/2016/06/15/russia-trained-civil-militias-along-bulgarias-borders-are-ready-for-war-with-refugees/
 Ny lahatsoratra iray vao haingana: http://www.balkaninsight.com/en/article/bulgaria-s-it-boom-offers-syrian-refugee-new-life-09-16-2016
 Ny fanambaran'ny Bratislava: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
 Famonoana faobe: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
 Revolisiona Hongroà ny taona 1956: https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1956
 tatitra : http://detainedinbg.com/